Iindaba -Uphuhliso oluzinzileyo ngumceli mngeni kodwa likwalithuba
Ngokwedatha, i-Global Footprint Network ipapasha uSuku loMthwalo oMninzi woMhlaba minyaka le. Ukususela ngale mini, abantu basebenzise yonke imithombo yendalo ehlaziyiweyo yoMhlaba ngaloo nyaka kwaye bangena kwilahleko yendalo. Umhla "woMhlaba oMninzi woSeto loMhlaba" ngo-2020 ngu-Agasti 22, ngaphezulu kweeveki ezintathu emva konyaka ophelileyo. Nangona kunjalo, oku kubangelwe kukuba ukunyathela kwendalo kwabantu kuye kwehla xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kunyaka ophelileyo ngenxa yefuthe lobhubhane, kwaye oko akuthethi ukuba utshintsho lwemozulu luyachaphazeleka. Imeko iyaphucuka.
Njengomthengi wamandla, umvelisi weemveliso kunye neenkonzo, kunye nenkokeli kwezobuchwepheshe, amashishini anyanzelekile ukuba akhuthaze uphuhliso oluzinzileyo kwaye angomnye wabakhuthazi abangundoqo bophuhliso oluzinzileyo. Ngokwengxelo "yoPhononongo malunga nokuSebenza kweZinjongo zoPhuhliso oluZinzileyo lwamashishini amaTshayina" ekhutshwe yiNkqubo yoPhuhliso yeZizwe eziManyeneyo, malunga ne-89% yamashishini amaTshayina ayaziqonda iinjongo zoPhuhliso oluZinzileyo (SDGs) kwaye ayaqonda ukuba imodeli yophuhliso oluzinzileyo ayinakuphela yonyusa ixabiso lenkampani, kodwa ikwanakho nokuzisa ifuthe elihle kwezentlalo, kwezoqoqosho nakwezendalo.
Okwangoku, uphuhliso oluzinzileyo lube yenye yezinto eziphambili ngokubaluleka kwiinkampani eziphambili zehlabathi. "Ukulungele okusingqongileyo", "ukukhula okubandakanya wonke umntu", kunye "noxanduva kwezentlalo" ziba zezona zinto zingumxholo wale mikhwa kunye nokuthunyelwa kweshishini, okuboniswa kwiingxelo zonyaka okanye kwiingxelo ezizodwa ukomeleza impembelelo yequmrhu kunye nexabiso lebrendi.
Kwiinkampani, uphuhliso oluzinzileyo alungomceli mngeni kuphela, kodwa lukwayixesha loshishino. Ingxelo yeZizwe eziManyeneyo ichaze ukuba ngo-2030, ukukhula koqoqosho kwihlabathi liphela okuqhutywa yi-SDG kuya kufikelela kwi-12 yezigidi zeedola zaseMelika. Ukulungelelaniswa ne-SDG kwinqanaba lesicwangciso kuya kuzisa izibonelelo ezininzi kwinkampani, njengokuphucula ukusebenza kakuhle, ukonyusa ukugcinwa kwabasebenzi, ukonyusa ifuthe lebrendi, kunye nokuphucula amandla enkampani kulawulo lomngcipheko.
"Ukongeza kwizibonelelo zoqoqosho, iinkampani zingafumana ukwamkelwa kurhulumente, abasebenzi, uluntu, abathengi, kunye namaqabane xa besenza uphuhliso oluzinzileyo, okwenza kube lula ukukhula. Oku kuyakukhuthaza iinkampani ukuba zithathe inxaxheba kuphuhliso oluzinzileyo kwaye ziqale. ukuthatha inxaxheba ukuthatha inyathelo ukwenza umjikelo olungileyo.